Bursa လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
တစ်ခုလုံးကိုမြန်နှုန်းကြာပေးသော bursada လမ်း calismalari
မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်ထားတဲ့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, 'တစ်ဦးထက်ပိုလက်လှမ်းမှီမြို့ကြီးများ' 'လမ်းအားလုံးခရိုင်က၎င်း၏အလုပ်ကိုဆက်လက်ကပြောသည်။
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်း၏ခရိုင်လစျြလြူရှုမရနိုငျတဲ့အဖွင့်နှင့်အတူမြို့လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပိတျဆို့နတေဲ့သွေးလွှတ်ကြော။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံးခရိုင်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူတတ်၏။
Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, ဂရုတစိုက်မွို့၌၎င်းတို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်ကိုလည်းသူတို့ခရိုင်ထဲမှာစေ့စေ့အလုပ်လုပ်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့အသွားအလာပြဿနာလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အသက်ရှူ Bursa အရှိဆုံးပြင်းထန်သောအမှတ် Aktas နိုင်ငံတော်သမ္မတကြုံတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုသူတို့ဒုက္ခရောက်နေဘာသာရပ်မှအလေးချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း, Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ "မှတ်ချက်ချသည်။ ကျနော်တို့ရုံးထံသို့ လာ. ကတည်းကကျနော်တို့ကြီးမြတ်အကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူပါ။ ကျနော်တို့အသိဉာဏ် applications များနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာလမ်းဆုံအမြန်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာပါ။ ကြှနျုပျတို့လည်းမကြာခဏ Bursa အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအလင်းရောင်၏အနာဂတ်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးငါတို့သည်ငါတို့၏လက်မှတ်ယူပြီးနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့ထွက်သယ်ဆောင်လမ်း "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအသင်းများကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှထောင့်တွင်နေ့ညဉ့်မပြတ်အလုပ်လုပ်ပူကတ္တရာအလုပ် Karacabey ခဲကောင်တီကျေးရွာတွင် 2200 မီတာပြီးစီးခဲ့သည်။ ဦးဆောင်လမ်းပြ Malkara ရပ်ကွက်ရပ်ကွက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကို 5000 မီတာDanişment Karacabey ရပ်ကွက်ငါ့ကိုဆီသို့ဦးတည် Izmir လမ်းကွန်နက်ရှင် 4000 မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းအသင်းများကိုမိမိတို့၏အလုပ်ကိုပြီးစီးပြီ, ခရိုင်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေဖြစ်လာဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ, Mudanya ခရိုင်Çınarlısu link ကိုလမ်းပေးသောÇınarlı - 4000 မီတာဆီသို့ဦးတည် Yaman, Çınarlı - Orhaniye ရပ်ကွက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကို 5100 မီတာနှင့်Çınarlı Kaymakob ရပ်ကွက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကို 3000 မီတာမီတာ 12100 စုစုပေါင်းအပေါ်ယံပိုင်းအလုပ်ပေါ်လာပြီးစီးခဲ့သည်။ နောက်တဖန် Mudanya Akköyခရိုင်မျက်နှာပြင်ဆီသို့ဦးတည်Dedeköyရပ်ကွက်မီတာနှင့် ဆက်စပ်. 4000 ဟာအပေါ်ယံပိုင်းစစ်ဆင်ရေး၏ပြီးစီးဖော်ပြထားသည်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကပိုအဆင်ပြေဖြစ်လာဖို့လုပ်ဆောင်နေ၏မပြတ်မတောက်လမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
Bursa အတွက်ရုပ်တုအပေါ်ဓါတ်ရထားလိုင်း-ကားဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ 11 / 10 / 2012 အားကစားကွင်းလမ်းလမ်းခင်းအလုပ်၏ပထမအဆင့်၏ပန်းပု-ဂိုဒေါင်လမ်းရထားလိုင်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ Darmstadt လမ်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုတင်သောဖြစ်စဉ်ကိုAltıparmakbaşladı.xnumxနေ့တိုင်အောင်ဆင့်ကမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, 20 နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက်ပေးသောဓါတ်ရထားလိုင်း T1 အပေါ်ပန်းပု-ဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကီလိုမီတာ။ မကြာသေးမီကခွကေိုသြဂုတ်လ, အ Darmstadt ရိပ်သာလမ်း၏အစမှအရိပ်သာလမ်းအားကစားကွင်းမှ စတင်. အခြေခံစွန့်ပစ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စီမံကိန်းအပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ tarring ၏ပထမအဆင့်ပြီးဆုံးသည့်အားကစားကွင်းလမ်း, Darmstadt လမ်းအလုပ်သံလမ်းနယ်ပယ်ကိုတင်သောစတင်ခဲ့သည်။ Darmstadt လမ်းအလုပ်ခန့် 6.5 ရက်ပေါင်းသည်အထိAltıparmakလမ်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခံရဖို့စီစဉ်ထားသည်။ လမ်းပေါ် 20 သို့မဟုတ် 1 လအတွင်းအaltıparmak ...
Uludag နှင်းလျှောစီးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပြည့်အဝလွှဲအတွက်ဆက်လက်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ 12 / 07 / 2013 Uludag နှင်းလျှောစီးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အောက်တိုဘာလ 29 Sarıalanအတွက်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာအဆောက်အဦး၏ထက်ဝက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်, ထိုဟိုတယ်ဇုန်မှခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ cable ကိုကားအတွင်းစကီးရာသီဆက်လက်မိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။ တလက်ပေါ်ဘူတာရုံ၏ဆောက်လုပ်ရေး, ကိုလည်းတိုင်စိုက်ပျိုးစတင်နေစဉ်။ ရိန်းနှင့်အတူရပ်နေရိုးစွန်းဒေသများမှအများစုသည်, ရွက်တိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ၏အကူအညီဖြင့်အဆင်ပြေသည်အဘယ်မှာရှိဒေသများရှိစိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ ဝင်ရိုးစွန်း STATION ကို, တဦးတည်းဝင်ရိုးစွန်းနှင့် 45 ဘူတာရုံ၏4454စုစုပေါင်း built ပါလိမ့်မည်ဖော်ပြအရာရှိများတည်ဆောက်ခြင်း, Kadıyaylနှင့်ဘူတာရုံSarıalan, Teferrüçအတွက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးKadıyaylaအတွက်ဘူတာရုံ၏ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူသည်ဘူတာအများတို့သည်လည်းBursalılarlaအရာရှိများဂုဏ်ယူဖြစ်အနီးအနားရှိအဆောက်အအစေခံမယ်လို့ရှင်းပြ ...
အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues 13 / 07 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT အလုပ်အဖွဲ့အားလုံးမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues: အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီ (YHT) အကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား Bilecik ဘူတာရုံသတင်းများအရဖွင့်လှစ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့ကြိုးစားခဲ့စဉ်ဘူတာရုံကနေဖွင့်လှစ် 10,9အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ရုံရက်ပေါင်းမီ။ အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လိုင်း, ထို 10 ဘူတာရုံ၏တဦးတည်း Bilecik ဘူတာရုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး 25 ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အဖြစ်ကြောင့်ယခင်ကထွက်သယ်ဆောင်ရက်များမှနှစ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းသည့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လိုင်း၏အဖွင့်, ဇူလိုင်လအတွင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ Bilecik ဘူတာရုံအဖွင့်တွင်စိုက်ပျိုးခံရဖို့ကြိုးစားနေ။ ဘာသာရပ်အပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်များခုနှစ်တွင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ဒုတိယဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Nihat Aslan ကြောင့် Bilecik အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဘူတာရုံကိုရပ်တန့်ကပြောပါတယ်။ ခြင်္သေ့သည် "Bilecik ဘူတာရုံ၏အဖွင့် ...
Bilecik မြန်နှုန်းရထားအလုပ်ကိုအပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက် 15 / 09 / 2014 733: Bilecik မြန်နှုန်းရထားအလုပ်ကိုအပြည့်အဝလွှဲထဲမှာရောက်နေပါတယ်။ အဆိုပါအထိမ်းအမှတ်အတွက်ပါဝင် Ertugrul Gazi နှင့် Willow ပွဲတော်ခြေသလုံးဝန်ကြီးချုပ် Ahmet Davutoglu, လမ်းပြန် Bilecik အတွက်ရှိတ် Edebali ၏သင်္ချိုင်းဂူသို့ရောက်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအလုပ်အကဲဖြတ် Davutoglu ကပြောပါတယ်: "Bilecik စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဘယ်မှာနှစ်ခုအဓိကစီမံကိန်းများကိုအကြောင်းကိုအလွန်နီးကပ်စွာကခံစားကျနော်တို့ဒီ ပတ်သက်. ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားထားတစ်ခုမှာ Bilecik အတွက်ဘယ်မှာမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဘူတာရုံပတ်ဝန်းကျင်လိုင်းကတဆင့်အဆက်အသွယ်၏ပြဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲ။ ။ ။ ဤအစီအစဉ်ကိုကြှနျုပျတို့ပွဲတော် Willow ထံသို့ လာ. ဘုရားသခင့ဆန္ဒရှိ, ဒီလာမည့်နှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ တဖန်, ငါသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, Bilecik-Yenisehir အချို့နည်းလမ်း Bilecikliler နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကိုသင်တို့သိ ...
Larende ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues 02 / 03 / 2017 Larende ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues: Karaman မြို့တော်ဝန်Ertuğrulအလုပ်ကြိုးစားသူ, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်း Lara Lara Grande အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအလုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Karaman Karaman မြူနီစီပယ်နှင့်အလုပ်နှင့် Kemal အကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု TCDD-Ulukışlaနယ်ပယ်အားကစားကွင်းဂျုံစျေးကွက်, 100 fused ။ တစ်နှစ်တာလမ်းနှင့်မီးရထားလမ်းအောက်မှာသွားစီစဉ်ထားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းပေါ်တွင်အလုပ်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ Ertugrul အလုပ်ကြိုးစားသူအရာရှိများဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းသွားထွက်ခွာနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏ရောက်ရှိပါကယခုနှစ်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပေးနှစ်ဆမည်, စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာမြို့တော်ဝန်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သမ္မတ, Lara ၏အခြားရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ...
Bursa ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို
အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လုပ်ငန်းခွင်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues
Sapancad ကတ္တရာ patch ကိုအလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်
အပြည့်အဝမြန်နှုန်းဖန်ဆင်းနေသည်နှင့်အတူကတ္တရာသူ Work Continues
Akçaray xnumx'inc အဆင့်လုပ်ငန်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues
အလုပ် Eskisehir အတွက်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းဓါတ်ရထားနှင့်အတူ Continues